तालिकाको सजावट निर्दिष्ट गर्दछ जसलाई डेटापाइलटद्वारा उत्पादित हुन्छ ।
डेटापाइलटले बटनहरूको रूपमा डेटाफाँटहरू प्रदर्शन गर्दछ जसलाई तपाईँं डेटापाइलट तालिका परिभाषा गर्न तानेर ल्याएर छाड्न सक्नुहुन्छ ।
एउटा डेटापाइलटको सजावट परिभाषित गर्न, पृष्ठ फाँटहरू, पङ्क्ति फाँटहरू, स्तम्भ फाँटहरू, र डेटा फाँटहरू क्षेत्रहरूमा डेटा फाँट बटनहरू तानेर छोड्नुहोस्. तपाईँंले एउटा डेटापाइलट तालिकामा डेटा फाँटहरू पुन: मिलान गर्न तानेर छोड्ने प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ
LibreOfficeले स्वचालित रूपमा बटनहरूमा क्यापसन जोड्दछ जसमा तिनीहरू डेटा फाँटहरूक्षेत्र भित्रबाट तानिन्छ । क्याप्सनले सूत्र जस्तै गरी डेटा फाँटको नाम समाहित गर्दछ जसमा डेटा सिर्जना गरिन्छ ।
प्रकार्य परिवर्तन गर्न जसमा डेटा फाँटको प्रयोग गरिन्छ । डेटा फाँटहरूमा क्षेत्रहरूमा डेटा फाँट संवाद खोल्नलाई बटन डबल-क्लिक गर्नुहोस् । तपाईँं पङ्क्ति फाँटहरू वा स्तम्भ फाँटहरू क्षेत्रहरूमा बटनहरू डबल-क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
परिभाषा गरेको डेटा पाइलट तालिकाका लागि थप विकल्प लुकाउँदछ वा प्रदर्शन गर्दछ ।
डेटा पाइलट तालिकाको परिणामहरू प्रदर्शन गर्दा सेटिङहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस् ।
डाटाबेस फाँट चयन गर्नुहोस् जसले प्रापकको इमेल ठेगाना समावेश गरेको छ.
क्षेत्र चयन गर्दछ जहाँ तपाईँं डेटा पाइलट तालिकाको परिणामहरू प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ ।
यदि चयन गरेको क्षेत्रले डेटा समाहित गर्दछ भने, डेटा पाइलटले डेटा अधिलेखन गर्दछ। अवस्थित डेटालाई नष्ट हुनबाट रोक्न परिणामहरू प्रदर्शन गर्न डेटा पाइलटलाई स्वचालित रूपमा क्षेत्र चयन गर्न दिनुहोस्.
खाली पङ्क्तिहरू उपेक्षा गर्नुहोस् ।
डेटा स्रोतमा खालीफाँटहरू उपेक्षा गर्नुहोस् ।
कोटिहरू परिभाषित गर्नुहोस् ।
पङ्क्तिहरू लेबुलद्वारा निर्दिष्ट अर्को सबभन्दा ठूलो कोटिको रूपमा कोटिको रूपमा बिना लेबुलहरू पङ्क्तिहरू स्वचालित रूपले मानाङ्कन गर्दछ ।
स्तम्भ गणनाको कुल जोड गणना र प्रदर्शन गर्दछ ।
पङ्क्ति गणनाको कुल जोड गणना र प्रदर्शन गर्दछ ।
फिल्टर थप्नुहोस् ।
डेटा पाइलट तालिकामा फिल्टर बटनु थप्दछ जुन स्प्रेडसिट डेटामा आधारित हुन्छ ।
फिल्टर संवादहरू खोल्दछ ।
विस्तृतमा ड्रिल सक्षम गराउनुहोस् ।
यो जाँच बाकस चयन गर्नुहोस् र वस्तुका लागि तालिकामा विस्तृत विवरण देखाउन र लुकाउन वस्तु तालिकामा डबल-क्लिक गर्नुहोस् ।
डेटापाइलट तालिकाको भित्र पट्टि विस्तृत विवरण परीक्षण गर्न
तल दिइएको एउटा गर्नुहोस्:
कक्षरूको दायरा चयन गर्नुहोस् र डेटा - रूपरेखा - विस्तृत विवरण देखाउनुहोस् रोज्नुहोस् ।
तालिकामा एउटा फाँटमा डबल-क्लिक गर्नुहोस् ।
यदि तपाईँंले जुनचाहिमा एउटै तहका आसन्न भएका फाँटहरू फाँट डबल-क्लिक गरेको खण्डमा विस्तृत देखाउनुहोस्संवाद खुल्छ:
विस्तृत विवरण देखाउनुहोस्
तपाईँंले चाहनु भएको विस्तृत विवरण देखाउनका लागि फाँट रोज्नुहोस् ।
डेटापाइलट सर्टकट कुञ्जीहरू